धमाधम बोनस घोषणा गर्दै फाईनान्स, हेर्नुहोस कस्को कती ? – Arthatantra.com
धमाधम बोनस घोषणा गर्दै फाईनान्स, हेर्नुहोस कस्को कती ?
काठमाडौ । पुष सकिदै गर्दा प्राय बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले बोनस र हकप्रद निष्कासन गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले चुक्ता पुँजीको सिमाना तोके पश्चात बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामा एकप्रकारको छटपटाहट देखिएको छ । चुत्ता पुजिको सिलिङ भेट्नको लागि बोनस, हकप्रद र साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भिडमा फाईनान्सहरु थपिएका छन् ।
यहि क्रममा मन्जुश्री फाइनान्सले गत आर्थिक बर्षको कमाईबाट राष्ट्र बैकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम हुनेगरि बोनस वितरण गरेको छ । फाइनान्सको शुक्रबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले बोनस र हकप्रदपछि पूँजी पूग्नेगरि बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
फाइनान्स कम्पनीले यसअघि जारी गरेको १७५ प्रतिशत हकप्रदपछि कायम चुक्ता पूँजी ७२ करोड ७८ लाख पाँच सय रुपैयाँको ६ प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि ०.३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्सले गत बर्ष १४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो ।
गत आर्थिक बर्षमा ६ करोड ४२ लाख खुद नाफा कमाएको फाइनान्सले चार करोड ३४ लाख ६२ हजार सात सय रुपैयाँको बोनस वितरण गर्न लागेको हो । प्रस्तावित बोनस राष्ट्र बैंक र फाइनान्सको बार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात शेयरधनीहरुलाई वितरण हुनेछ ।
त्यस्तै जेबिल्स् फाइनान्सले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट बोनस घोषणा गरेको छ । फाइनान्सको शुक्रबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलार्इ असार मसान्तमा कायम पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
फाइनान्स कम्पनीले असोज १ गतेदेखि कात्तिक २० गतेसम्म शतप्रतिशत बराबरको २८ लाख ८९ हजार ५६२ दशमलव ५० कित्ता हकप्रद विक्री गरेको थियो भने हकप्रदपश्चात कायम चुक्त्ता पूँजी ५७ करोड ७९ लाख १२ हजार पाँच सय रूपैयाँको ४० प्रतिशत थप हकप्रद विक्री गर्ने प्रकृयामा रहेको छ ।
फाइनान्सले गत आवमा तीन करोड ६२ लाख ७१ हजार रूपैयाँ मुनाफामध्ये दुर्इ करोड ८८ लाख ९५ हजार ६३५ रूपैयाँको बोनस तथा बोनसमा लाग्ने कर तिर्न १५ लाख २० हजार ८२२ रूपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित बोनस राष्ट्र बैंकको स्विकृती पश्चात कम्पनीको साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि सेयरधनीलार्इ वितरण हुनेछ ।
२०७४ पुष ३० गते प्रकाशित